Blog Reader: [MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA]4New Entries: Cover of Myanmar Thit Magazine - No. (4), Jan, 009
[MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA]4New Entries: Cover of Myanmar Thit Magazine - No. (4), Jan, 009
Return of Lay Phyu - First Alpine-IC Music Show at Mandalay
ပြည်သူ့အချစ်တော် အဆိုတော် လေးဖြူသည် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မှန်း အသေအချာမသိရဘဲ 'ကျွန်တော် စတိတ်ရှိုးမဆိုတော့ပါဘူး' ဟုဆိုကာ စတိတ်ရှိုးလောကမှ (၃) နှစ်ခန့် ပျောက်ကွယ်နေခဲ့ပြီး သီချင်းခွေများထုတ်လုပ်၍သာ သူ၏ ချစ်သော ပရိသတ်များကို ဖျော်ဖြေနေခဲ့သည်။
``ကျွန်တော်က သုံးသောင်းတန်း လက်မှတ်ဝယ်ပြီး ၀င်ကြည့်တာဗျ။ အစကတော့ ပရိသတ်က ငြိမ်နေသေးတယ်။ လေးဖြူအလှည့်လည်း ရောက်ရော နောက်က ၁၂၀၀၀ တန်းက ပရိသတ်တွေက ရှေ့က သံဆူးကြိုးအတားအဆီးတွေကိုတောင် ဖျက်ပြီး ရှေ့ကို တက်လာတော့ သုံးသောင်း၊ နှစ်သောင်းတန်းတွေလည်း ၁၂၀၀၀ တန်းနဲ့ အတူတူဖြစ်သွားတော့တာပဲဗျို့။ မန္တလေးပရိသတ်က စတိတ်ရှိုးကြည့် အကျင့်နည်းလို့ထင်တာပဲ။ အတော်ကြမ်းတယ်ဗျို့။ ဘေးနားရှိတဲ့ ရေကူးကန်ထဲ ဆင်းကူးတဲ့လူက ကူးကြ၊ ရန်ဖြစ်တဲ့လူက ဖြစ်ကြ၊ ပွဲပြီးကာနီးတော့ စင်ပေါ်ကိုတောင် ထိုင်ခုံတွေနဲ့ လှမ်းပေါက်တဲ့လူက ပေါက်ကြနဲ့။ အဆိုတော်တွေလည်း စိတ်အတော်ညစ်သွားတယ် ပြောတယ်။ အဆိုတော်တွေလည်း သီချင်းအပုဒ်ရေကို လျှော့ဆိုလိုက်ရတယ်တဲ့။ ဒီအထဲ ဟိုတယ်အပြင်ဘက်က ခဲနဲ့ လှမ်းထုတာက ပါသေးသဗျ။ စက်အဖွဲ့သားတစ်ယောက်တော့ ခေါင်းကွဲသွားတယ် ပြောတာပဲ။´´
``ပရိသတ်ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ဘယ်အဆိုတော် စင်ပေါ်တက်တက် လေးဖြူ ... လေးဖြူ... ချည်းပဲ လှိမ့်အော်ကြတာပဲ။ အဆိုတော်တွေကတော့ အပေးအယူမျှအောင် ဖျော်ဖြေသွားပါတယ်။ လေးဖြူကလည်း မန္တလေးပရိသတ်ကို ``ဒီပရိသတ်ထဲ နန်းရှေ့က ပါလား... ပိုက်ကျုံးက ပါလား... မြောက်ပြင်က ပါလား... အစသဖြင့် ရှေ့ကမေး၊ ပရိသတ်ကလည်း ပါတယ်...ပါတယ်...ပါတယ်...ပြန်အော် အစသဖြင့်ပါပဲ။ အဆိုတော်တွေနဲ့ အတူ ပရိသတ်ကလည်း သီချင်းတွေ လိုက်ဆိုနဲ့ပါပဲ။´´